Amakhemikhali Okupakisha Factory, Abahlinzeki - China Amakhemikhali Okupakisha Abenzi
I-Metal Tin Cans-Container yokupakisha i-Car Wax ne-Polish
Lapho ochwepheshe abathenjiwe ekunakekelweni komhlaba - i-VESLEE Inc. - befuna ukupakisha kwe-wax yokuqala, basebenze nathi ukudala iphakethe eliwina umklomelo elaziwa nge-tin top wax tin. Iphakethe le-VESLEE lahlonishwa njenge- “Can of the Year,” umklomelo waminyaka yonke ohlonipha ukwakheka nobuchule obuhle bokuqanjwa kwensimbi okuthengiswayo.
Amaphayiphi wensimbi engu-20Liters Paint Tin - Amabhakede kathayela angabonakali
Into eyodwa wonke amakhasimende ethu afana ngayo isifiso sokuthengisa umkhiqizo wabo omningi. Amathini opende wangokwezifiso anika imikhiqizo umkhawulo wokuncintisana. Isiphetho esiphakeme, esingezwe ngenani, ishalofu lokukhalaza kwethini eliqoqekayo sidonsa iso futhi sisebenza njengesikhangiso esihlala njalo somkhiqizo wokuqala.